Turkiga oo shidaal ka baaraya bariga badda Mediterranean - Tilmaan Media
Warbixin uu daabcay wargayska Turkiga kasoo baxa ee Dialy Sabah ayaa sheegtay in Turkigu todobo xirmo oo bariga badda Mediterranean uu shidaal baarid iyo qodid ka bilaabi doono muddo saddex illaa afarbilood gudaheed ah iyada oo latixraacayo heshiiskii dhawaan dhex maray dalalka Liibiya iyo Turkiga. Hadalkan ayaa waxaa laga soo xigtay wasiirka tamarta iy khayraadka dabiciiga ah ee Turkiga Fatih Dönmez maalinkii isniinta.
Wasiirka ayaa sheegay in baaritaanada tamarta ee Turkigu ka wadaan badda Mediterranean ay labo nooc u qaybsan yihiin. Kuwa daba socda ogolaansho ay bixisay Jamhuuriyadda Qubrusta Waqooyiga ee Turkiga raacsan (TRNC) iyo kuwa daba socda ogolaansho ay siisay dowladda Turkiga shirkadda batroolka Turkiga (Turkish Petroleum).
Sida warbixintu sheegtay Shirkadda batroolka Turkiga ayaa todobaadyadii lasoo dhaafay soo gudbisay codsi ah in ay shidaal sahnmin iyo qodid ka samayso todobo xirmo oo kutaal bariga badda Mediterranean iyada oo laraacayo heshiiskii dhex maray Turkiga iyo Liibiya.
Bishii November 27 eedii ayaa Turkiga iyo dowladda qaramada midoobay aqoonsantahay ee Liibiya waxay kala saxiixdeen labo heshiis oo mid qusseeyo iskaashi dhanka millatariga kan kalana qusseeyo xuduudaha badeed ee labada dal.
Sida uu sheegay wasiirka tamarta iyo khayraadka dabciiga ah ee Turkigu dhamaystirka iyo buuxintta shuruucda la xiriirta mashruucaan waxay qaadan kartaa illaa saddex bilood, haddii aysan wax isbaddalin shirkada tamarta Turkigu na waxay billaabaysaa sahminta iyo qodidda shidaal ee meelaha la isla gartay.
Iyada oo dowladda Turkigu ilaalinayso xuquuqda ay u leedahay Qubrusta Waqooyi ee Turkiga raacsan (TRNC) ka faaiidaysashada khayraadka baddaas ku jira, ayaa Turkigu laga soo billaabo sanadkii hore wuxuu bariga badda Mediterranean u diray toomaha shidaalka qoda.
Dowladda Giriiga iyo Qubrus oo kaashanaya dalalka Yurub ayaa kasoo horjeedsaday tallaabooyinka Turkiga kuna hanjabay in ay qabanayaan doomaha Turkiga soo diray.
Turkiga ayaa sheegay in doonayaan in tamarta badda Mediterranean ay noqotto mid horseedda nabad iyo barwaaqo sooran ay gaaraan dhamaan dalalka kulaala baddaas, isla maraasna aysan doonayn in arintan horseedo colaad.
Turkiga wuxuu xeebaha liibiya kawada shaqooyin shidaal baarid muddo labaatan sano ah laakiin waxay istaageen 2011 kadib kacdoon shacab iyo dagaaallo sokeeye oo is xigay.
Sida uu sheegay wasiir Dönmez, marka la fiiriyo isbaddaladii u dambeeyay ee ka dhacay Liibiya, waxa jira fursado Shirkadaha Turkigu ay ku fulin karaan mashaariic dhisid kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaas. Wuxuu sheegay in qandaraaslayaasha iyo shiradaha Turkigu ay gobolka sifiican u garanayaan iyada oo hadda labo shirkadood oo waawayn oo Turkiga laga leeyahay ay gacanta ku hayyaan labo mashruuc oo waawayn oo dhanka korontada ah oo shaqa billaabi doona bil ama labo bilood gudaheed.